မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: October 2011
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:12 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:09 AM0comments Links to this post
နာဂဒေသ စီးပွားရေး နှင့် လူမှုအဖွဲ့စည်းများ မန္တလေးတွင် တွေ့ဆုံစည်းဝေး
နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မှဒေသခံတွေ မန္တလေးမြို.မှာ စီးပွားရေး၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတည်ထောင် ရေး၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုက်ဖျက်ရေး ၊ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို သိရပါတယ်။ စီးပွားရေးနဲ. ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေကို Nagaland လို့ခေါ်တဲ့ အိန္နိယဒေသက ခေါ်ယူမယ်လို့သတင်းမှာဖေါ်ပြ ပါတယ်။
နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဥက္ကဌ Ru San Chu က ပြောရာမှာ ယခု ကျင်းပတဲ့အစည်းဝေးကို Shwe Naung Yan co.ltd. က တာဝန်ယူကျင်းပပေးတာလို့ပြောပါတယ်။ အစည်းဝေးမှာ Sarameti ကုန်သယ် ကြီးများအသင်းက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို.ကြိုးစားမှဖြစ်ပြီး ပညာ ရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းများရရှိရေး၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထောက်ပံ့ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆယ်မြောင်းနဲ့ လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နာဂဒေသခံများကတော့ Dimapur မှ Chabou & co. Ltd ကိုအထူးအလေးထားကြိုဆိုလျှက်ရှိပြီး အိန္နိယ နဲ. မြန်မာ အစိုးရများ ကြားမှာ ပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နာဂ ဒေသရဲ့ အကြီအကဲ များကတော့ Nagaland ကလာတဲ့ စီးပွားရေးအဖွဲ့များကို လက်ခံကြိုဆိုသွားမယ်လို. ကြေငြာပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:49 AM 1 comments Links to this post
တောင်ကိုရီးယား နှင့်မဲခေါင်ဒေသ စီးပွားရေးပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်
.. ကီလိုမီတာ ၄၈၀၀ ရှည်လျှားသောမဲခေါင်မြစ်
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဌာန အနေဖြင့် မဲခေါင်ဒေသ ၅ နိုင်ငံ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပမယ်လို. တရားဝင်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ ထိုင်း၊ဗီယမ်နမ်နဲ. လာအိုနိုင်ငံတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးနဲ.ဖွံ.ဖြိုးရေးကိစ္စများ အဓိက ထားဆွေးနွေးမယ်လို.သတင်းမှာဖေါ်ပြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းက ဟနွိုင်မှာကျင်းပတဲ့ ခေါင်းဆောင်များအဆင့် အရှေ.တောင်အာရှ နိုင်ငံများအစည်းအဝေး မှာ သမ္မတ လီမြောင် ဘက် က အဆိုပြု တင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို.ဆိုပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားဟာ မဲခေါင်ဒေသနဲ. စီးပွားရေးပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို. နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများအ ဆင့်အစည်းဝေးမှာ တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မဲခေါင်မြစ်ဟာ ကီလိုမီတာ ၄၈၀၀ ကျော်ရှည်လျှားပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင်းက စတင်မြစ်ဖျားခံစီးဆင်းတာဖြစ်ပါ တယ်။ ရေအားလျှပ်စစ် ထုပ်လုပ်မှု နဲ. အခြား ရေအရင်းအမြစ်များ အတွက် အရေးပါတဲ့ မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မဲခေါင်ဒေသ ဟာလည်း တစ်ဟုန်ထိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိနေ တာဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနဲ. မဲခေါင် ဒေသ ၅ နိုင်ငံတို.ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ ကုန်သွယ်မှု ၂၅ ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ် က ကုန်သွယ်မှု ၁.၅ ဘီလီယံထက်စာရင် အဆများစွာ တိုးတက်လာတယ်လို. တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားနေရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မဲခေါင်မြစ်အတွင်း မှာ မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံအားလုံးတို.က ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်ယူဖို့အတွက် လုပ်ဆောင် လျှက်ရှိပြီး မြစ်ရဲ့ အထက်ပိုင်းမှာ မီဂါဝပ် ၂၈၉၃၀ ထုပ်လုပ်နိုင်မယ်လို.ခန်.မှန်းပြီး မြစ်အောက် ပိုင်းမှာတော့ မီဂါဝပ် ၃၀ ၀၀၀ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ယူနိုင်မယ်လို.ခန်.မှန်းထားပါတယ်
(မြန်မာ နဲ. လာအို နိုင်ငံတို.ရဲ့နယ်နမိတ်အဖြစ် မဲခေါင်မြစ်ကိုတွေ.မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်)
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:24 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:08 PM3comments Links to this post
ဟောင်ကောင် မြန်မာ တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်းပျံသန်း နိုင်ဖို. နှစ်ဖက်အာဏာပိုင်တွေဆွေး နွေးနေ ကြတယ် လို.ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ဟောင်ကောင် လေကြောင်းလိုင်းတာဝန်ခံတွေက ပြည်တွင်း မှာ လက်မှတ် ရောင်းချဖို. အေးဂျင့်တွေရှာဖွေလျှက်ရှိပါတယ်။
ဂျပန်နဲ. တောင်ကိုရီးယား ခရီးစဉ်တွေကတစ်ဆင့် မြန်မာ နိုင်ငံကိုပြေးဆွဲတာအဆင်ပြေပေမဲ့ ဟောင်ကောင် အပြန်ခရီးစဉ်အတွက်ခရီးသည်ရရှိမှု နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တုန်းက Hongkkong Express မှ ခရီးသည် ၁၆၄ ဦးဆန်.တဲ့ ဘိုးအင်း ၇၃၇-၈၀၀ လေယဉ်များနဲ. တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ် ၄ လခန်.ပြေဆွဲခဲ့ဘူးပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရပ်နား ခဲ့ရတာပါ။ မြန်မာ လေကြောင်းလိုင်း MAI ကလည်း ဟောင်ကောင် ရန်ကုန် တိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်များကို ပြေဆွဲခဲ့ပေမဲ့ ခရီးသည် နည်းပါးတဲ့အတွက်ပဲရပ်နား ခဲ့ရပါသေးတယ်။
ယခင် တိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်များ မရှိတုန်းကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို.ကို ခရီးစဉ်တစ်ထောက်နားပြီးမှ သွားလာနိုင်ကြပါတယ်။
ဟောင်ကောင် လေဆိပ်ဟာ လေကြောင်း လိုင်းပေါင်း ၉၀ ကျော် နဲ. ကမ္ဘာ. နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ကို ပြေဆွဲလျှက်ရှိပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ခရီးသည်ပေါင်း သန်း ၅၀ ကျော်ကို လက်ခံနိုင်ခဲ့တဲ့ လေဆိပ်တစ် ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကြီးမားတဲ့ လေဆိပ်တစ်ခုက မြန်မာပြည်ကို ဆင်းသက်ဖို. ခရီးသည် နည်းပါးတယ် တာလည်း မြန်မာ့ခရီးသွား လုပ်ငန်းအတွက် အားပျက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်ပြည်ဟာ ဘယ်စံနဲ.ပဲတိုင်းတိုင်း အလွန်ပဲနောက်ကျနေတဲ့ ပမာဏကို ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို.ပါတီမှာ ဟောင်ကောင် လေကြောင်းလိုင်း တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုကို ကြိုဆိုလိုက်ပြီး ရန်ကုန်လေဆိပ် ရဲ့လေကြောင်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို တိုးမြှင့်နိုင်ဖို.လည်း မြန်မာ အစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါ တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လေကြောင်းလိုင်းတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေက အလွန်ပဲနည်းပါးလှပါ တယ်။ လေယဉ်ရေးပေါ်ပြင်ဆင်နိုင်မှု၊လေယဉ်ဆီနဲ. အခြား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု၊ လေယဉ်ခရီးသည် များအတွက် လိုအပ်သော အစားအသောက်များဖြည်.တင်းနိုင်တဲ့ အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှု၊ လေဆိပ် တွင်း ခရီးသည်ဝင်ထွက်မှု ၊ လေဆိပ်မှ မြို.တွင်းသို. ခရီးသည် ပို.ဆောင်မှု စသည်ဖြင့်တွေက တိုးတက်မှုများစွာ ကျန်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:18 AM0comments Links to this post
မြန်မာ စစ်ပညာသင်များ မလေးရှားတွင် စစ်ပညာလေ့လာဖို.စေလွတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားကာ ကွယ်ရေးဝန်ကြီးက သတင်းထောက်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်း မလေး ရှား နိုင်ငံကို ပြီးခဲ့တဲ. ကြာသာပတေးနေ့ထဲက ၃ ရက်ကြာ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ၎င်းရဲ့ခရီးစဉ် အတွင်းမှာ ယခုလိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာက မလေး ရှားနိုင်ငံထုတ်ရေတပ် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများဝယ်ယူမှာဖြစ်ပြီး စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စား လှယ်တွေကိုလည်းစေလွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဟာ ၎င်းရဲ့ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး အဆင့်မြင့်စေဖို.နဲ. စစ်လက်နက်စက်ရုံများ ခေတ်မှီဖို.အတွက် မလေးရှားနိုင်ငံမှလေ့လာမှုပြုဖို.လိုလားတဲ့အကြောင်း၊ မြန်မာ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို လက်ခံတွေ.ဆုံခြင်းဟာ စစ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်လို. မလေးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ပြောဆို ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီး စဉ်ဖြစ်တယ် လို.သတင်းမှာဖေါ်ပြပါတယ်။ မြန်မာဝန်ကြီးဟာ မလေးရှားစစ် လက်နက်စက်ရုံကြီးနှစ်ခုသို့ လည်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းနဲ. လေကြောင်းပြပွဲကို ပါဝင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိပြီး Langkawa မှာ ဒီဇင်ဘာလကျရင်ကျင်းပမဲ့ အာရှ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပြပွဲ ကိုလည်းတက်ရောက်မှဖြစ်ပါ တယ်။
ကျွန်ုပ်တို.ပါတီကတော့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရောင်းရငွေ ပူပူနွေးနွေးလေးတွေ မလက္ကာရေလက်ကြားကို ဖြတ် ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခိုလှုံသွားမဲ့အရေး ကို စိတ်လေးလျှက်ရှိပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 8:21 AM 1 comments Links to this post
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျန်ရှိနေသော သီး လေးသီးအဖွဲ့သားသုံးဦးအား မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ပြန်ဝင်လာရန် ခေါ်ယူထားရာ နိုဝင်ဘာလ လယ်လောက်တွင် ပြန်လည် ရောက်လာနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့်အဖွဲ့ကို စတင်တည် ထောင်သူ လူရွှင်တော်ဇာဂနာက အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က ပြောသည်။
သီးလေးသီးအဖွဲ့ဝင် သုံးဦးဖြစ်သည့် ပန်းသီး၊ကြယ်သီးနှင့် မင်းသမီးမြစပယ်ငုံတို့ကို ပြည်တွင်း ပြန်ဝင်လာရန် ပြောဆိုခဲ့ရာ ၎င်းတို့သည် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ပြည်တွင်းပြန်ဝင်လာရန် ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ဇာဂနာက ပြောသည်။
"နှစ်သီးကော၊ မင်းသမီးကော ပြန်ခေါ်ထားတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော် ခေါ်မှ ပြန်လာမယ်လို့ ပြောထားတယ်။ ရက်ညှိနေတယ်"ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယနေ.ည ၁၉-၁၀-၂၀၁၁ နေ.တွင် ရခိုင်နှင့်မောင်းတောမြို.များသို.မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နိုင်
အင်အားအသင့်အတင့်ရှိသော ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း တစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကို ၀င်ရောက်ဖို.ရှိတယ်လို. ဆိုပါတယ်။ မောင်းတော့မြို့ အနောက်ဖက် ၅၆ ကီလိုမီတာ အကွာ အဝေးရှိတဲ့နေရာကို ဗဟိုပြုတာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်ကို စစ်တွေနဲ. အနီးတစ် ၀ိုက်ကို ယနေ.ည သန်းခေါင်အချိန်လောက်မှာ ၀င်ရောက်မယ်လို.ခန်.မှန်းပါတယ်။
လေတိုက်နှုံး တစ်နာရီကို ၉၆ မှ ၁၁၂ ကီလိုမီတာနှုံးနဲ.တိုက်ခတ်နိုင်ပြီး ၁.၈ မီတာမှ ၂.၄ မီတာအမြင့် ရှိတဲ့ လှိုင်း လုံးများ ရိုက်ခတ်ဖွယ်ရှိတယ်လို.ဆိုပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:52 AM0comments Links to this post
မြန်မာသင်္ဘောသားများ လိုင်စင်အတုများကိုင်ဆောင်မှုဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖမ်းဆီးခံရ
မြန်မာသင်္ဘောသား အယောက် ၂၀ ခန်.ကို သင်္ဘောသားလိုင်စင်အတုများ နဲ. တရုတ်နိုင်ငံဆိပ်ကမ်းတစ်ခု မှာ ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို.ဆိုပါတယ်။ ၎င်းတို.ဟာ အခွန်ရှောင်ဖို.ရည်ရွယ်ချက်နဲ. သင်္ဘောလိုက်ခွင့် လိုင်စင် အတုများကို ကိုင်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို.ဆိုပါတယ်။ မြန်မာသင်္ဘောသားများဟာ လိုင်စင်အတုများအတွက် ဒဏ်ကြေးငွေအဖြစ် ယွမ်ငွေ ၁၅၀၀ ( အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၅) ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်းကို အရှေ.တောင်အာရှမှ သင်္ဘောသား ၅၀၀၀ ခန်.နှစ်စဉ်ဝင်ထွက်လျှက်ရှိပြီး ၃၀% ကတော့ လိုင်စင်အတုများကိုင်ဆောင်ထားတာလို.ဆိုပါတယ်။ မြန်မာသင်္ဘောသားတွေက သူတို. နိုင် ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်တာကိုဖုံးကွယ်ဖို.အတွက် လိုင်စင်အတုများကိုကိုင်ဆောင်တာဖြစ်ပြီး လိုင်စင်အတုတစ် စောင်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်က ဒေါ်လာ ၁၀၀ အောက်မှာပဲရှိပါတယ်။ မြန်မာသင်္ဘာသားများကတော့ ယခု လိုလိုင်စင်အတုများနဲ.အဖမ်းခံရတဲ့အပေါ်လုံးဝ စိုးရိမ်မှုမရှိကြောင်း အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း တို.ထံတွင် လိုင်စင်အစစ်များရှိ၍ဖြစ်တယ်လို.ဆိုပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာ အလုပ်သမားများအတွက် အခွန်ဆောင်တဲ့နှုံးထားကို ၂ % အထိလျှော့ချထားပေမဲ့ ၆ လသာသက်တမ်းရှိတဲ့အတွက် ပိုမိုသက်တမ်းတိုးဖို.လိုအပ်နေတယ်လို. ကျွန်ုပ်တို. ပါတီက ယူဆပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:56 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:50 AM 1 comments Links to this post
ကျွန်ုပ်တို.ပါတီမှ တာတာ ကားကုမ္ပဏီဝင်ရောက်လာမှုအားကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ တာတာ ကားကုမ္ပဏီ ဟာ အိန္နိယ ရဲ့ အကြီးဆုံးကားကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပြီး ဂျာမန် နည်းပညာကို ဒိန်းမလားဘင့် ကုမ္ပဏီမှ ရယူထားတာဖြစ်ပါ တယ် ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယနေ.ထိ အိန္နိယ နိုင်ငံတွင်း ကားစီးရေ ၄ သန်းထုတ်လုပ် ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိန္နိယ နိုင်ငံအတွက်၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ အခွန်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၇.၄၆ ဘီလီယံရှာပေးခဲ့တယ်လို.ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ စတုတ္ထ အကြီးဆုံး ထရပ်ကားထုပ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ၊ ကမ္ဘာဒုတိယ အကြီးဆုံး ဘတ်စ်ကား ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကြီးလာတာ မကြိုဆိုလို.မဖြစ်တဲ့အကြောင်း Sanction တော်လှန်ရေးသမားကြီးတို.အားသိစေအပ်ပါတယ်။
ပြဿနာကတော့ တာတာ ကားကုမ္ပဏီ က မြန်မာ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ. စာချုပ်ချုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို. ပါတီမှ တာတာ ကားကုမ္ပဏီရဲ့ အစုရှယ်ရာတွေအားလုံးကို ပြင်ပကိုထုပ်ရောင်း ပြီး ကားကုမ္ပဏီကို နိုင်ငံပိုင်မလုပ်ဖို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အိန္နိယ အစိုးရကိုလည်း တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများအားလုံးဟာ အရှုံးပေါ်နေတာပါ။
ရာဘာစိုက်ပျိုးထုပ်လုပ်မှုနဲ. ရာဘာစက်မှုနည်းပညာများလည်း လာရောက်ရင်းနှီးဖို. အိန္နိယမှကမ်းလှမ်းထား တယ်လို.လည်းသိရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို.ပါတီအနေဖြင့် ရာဘာစိုက်ပျိုးမှုအား ပြည်ပလာရောက်ရင်းနှီးတာကို မလိုလားပါဘူး။ ရာဘာလုပ်ငန်းဟာ မြေကြီးကိုရင်းပြီး အင်မတန် ၀င်ငွေကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော စိုက်ပျိုးပင်များနဲ.မတူတဲ့အချက်က သေချာစွာ အစေးခံလို.ရတဲ့ အဆင့်ရောက်ရင် ထုတ်လုပ်မှု စရိတ်မကုန်တော့ပဲ နှစ် ၃၀ မှ ၅၀ လောက်အထိ နှစ်ရှည် အကျိုးရှိစေတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ငွေရင်း ဒေါ်လာဘီလီယံ အနည်းငယ် ရင်းနှီးလိုက်တာကိုလက်ခံလိုက်ရင် မြေဧက သန်းပေါင်းများစွာကို တိုင်း တစ်ပါးလက်ထဲ နှစ်ရှည် အပ်လိုက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြား သော နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးရတဲ့ သီးနှံများက တော့ စွန်.စားမှုများတဲ့အ တွက် ရင်းနှီးမဲ့သူရှားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို.ပါတီမှ နှစ်ရှည်သီးနှံပင် များကို ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအား လုပ်ပိုင်ခွင့် ချပေးခြင်းကို ကန်.ကွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူအပေါင်းအားအသိပေးရင်း။
တာတာ ကားကုမ္ပဏီ ၀င်ရောက်လာမှုကို တော့ အထူးပဲလက်ကမ်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:00 AM0comments Links to this post
မြန်မာ မှ အိန္နိယသို. ကုန်တန်ဆာခလျှော့ချပေးရန်တောင်းဆို
အိန္နိယဟာ နှစ်စဉ် ပဲတန်ချိန် ၃ သန်းမှ ၄ သန်းအထိလိုအပ်လျှက်ရှိပြီး လိုအပ်ချက်အားမြန်မာနိုင်ငံမှပုံမှန် တင်သွင်းလျှက်ရှိနေပါတယ်။ ယခင်မြန်မာ ကုန်သယ်ကြီးများအသင်း ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့် မှာ ယခု အခါတွင် ၀န်ကြီးအဖြစ် ဦးသိန်းစိန် ၏ ခရီးစဉ်တွင်လိုက်ပါလျှက်ရှိပြီး။ အိန္နိယ သို.ကုန်စည်များ သင်္ဘောတင် စရိတ်မှာ အခြားတိုင်းပြည်များနှင့်စာလျှင်မြင့်မားလျှက်ရှိသဖြင့် လျှော့ချပေးရန်ညှိနိုင်းသည်ဟု သိရှိရပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေဖြင့် အခွန်နှင့် ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်လျှက်ရှိပြီး အိန္နိယ ကဲ့သို.သော တိုင်းပြည်များကို ဆွဲဆောင်ဖို.ရည်ရွယ်တယ်လို.ပြောခဲ့တယ်လို.ဆိုပါတယ်။ မြန်မာ အိန္နိယ ကုန်သွယ်မှုပမာ ဏ မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောလုပ်ငန်းနဲ. အခြားဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များကို တိုးချဲ.ဖို.လိုကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္နိယ သံအမတ်ကြီးက တင်ပြခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ နယ်ခြား ကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ဖို.၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနည်းပညာများ မြှင့်တင်နိုင်ဖို. နဲ. ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို.ကိစ္စများပါဝင်မယ်လို.ဆိုပါတယ်။
အိန္နိယဟာ စားနပ်ရိက္ခာတင်သွင်းမှုအတွက် မြန်မာကို အားထားပုံရရှိပြီး မြန်မာ၏ သီးနှံထုပ်လုပ်ရေးလုပ် ငန်းများကို ကူညီပေးခြင်းဖြင့် ရိက္ခာပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို.ကြိုးစားပုံရကြောင်း ကျွန်ုပ်တို.ပါတီမှ သုံးသပ်ရပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 12:31 PM0comments Links to this post
သီးသန်.သဘောတူညီထားသော နေရာများတွင် သုံးစွဲရန်အတွက် အိန္နိယမှ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ကူညီသွား မည်ဖြစ်တယ်လို. ဒေလီမှလာသောသတင်း တစ်ရစ်မှာ ဖေါ်ပြ ပါတယ်။ မြန်မာသမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ သဘောတူခဲ့ တာဖြစ်ပြီး နည်းပညာနဲ.ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်သွားမဲ့အထဲမှာ စိုက်ပျိုး ရေးဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများနဲ. ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ရေဆင်းတက္ကသိုလ်နဲ.မနလေး နည်းပညာ တက္ကသိုလ် မှာ ပြုလုပ်သွား မယ်လို.ဆိုပါတယ်။
မြန်မာဘက်မှ အိန္နိယ နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီများးကို လာရောက်ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရထားလမ်း ဆက်သွယ်ရေး၊ ရေလမ်းဆက်သွယ်ရေးနဲ. ဘစ်စကားလုပ်ငန်း များ မှာ ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး ရေလမ်း အဖြစ်နဲ. Chennai-Yangon ယခင် Madras နဲ. Kolkata-Yangon ယခင် ကာလတ္တကတား မြို.များ အကြားပြေး ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:15 AM0comments Links to this post
မြန်မာနဲ. အိန္နိယ ဟာ အရေးကြီးတဲ့ ဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး တရုတ်နဲ. အိန္နိယ ဆက်ဆံရေးဟာလည်း အရေး ကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိမိတို.အကြား မြန်မာ့အရေးနဲ.ပတ်သက်ပြီး ဘာမှပြိုင်ဆိုင်စရာမရှိဘူးလို. အိန္နိယ နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်လာ သန်း ၁၂၀ တန် စစ်တွေရေနက်ဆိပ်ကမ်း ကို ၂၀၁၃ မှာ အပြီးသတ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ် ပြီး အာရှနဲ. ဆက်သွယ်တဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကိုလည်း ၂၀၁၄ မှာ အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ် လို.မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြေဆိုပါတယ်။
၂၀၁၅ မှာ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံအထိ တိုးမြှင့်နိုင်ဖို.လျှာထား ချက်ပြီး အိန္နိယရဲ့ ရေနံကုမ္မဏီကြီး သုံးခုရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း တိုးမြှင့်သွားမယ်လို.ဆိုပါတယ်။
တရုတ်နဲ.ပြည်နဲ. အိန္နိယ ဆက်ဆံရေးဟာ သုညသဘောဆောင်တဲ့ အနေထားမျိုးရှိမှာမဟုတ်ပဲ နယ်ပယ် တိုင်းမှာ လုပ်ကိုင်နိုင်မှုစွမ်းအား ပြည်ဝစွာ ရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို.ပြောကြားပါတယ်။
မြန်မာ၊အိန္နိယ ၊ တရုတ် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေဟာ မြန်မာပြည်အတွက် ပထ၀ီ နိုင်ငံရေးမှ ပေးအပ်သော ဒေသတွင်း အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို.ပါတီမှ ယူဆပြီး အိန္နိယ နိုင်ငံရဲ့ ရင်းနှီးမြုတ်နှံ မှု များကိုလည်း ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ.နဲ. ရေနံကို အိန္နိယနဲ. တရုတ်နိုင်ငံအားမျှတစွာ ခွဲဝေရောင်းချတာ ကို ကျွန်ုပ်တို.ပါတီမှ ကြိုဆိုလိုက်ပြီး အိန္နိယရဲ့ ကွန်ပြူတာနည်းပညာနဲ. မော်တော်ကားထုပ်လုပ်မှု၊ ကူး သန်း ရောင်းဝယ်မှု အနာဂတ်ကာလ စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း အထူး အလေးထား သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:15 PM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:36 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:11 AM0comments Links to this post
Myanmar Willing to Set up Joint Economic Commission with Iran
TEHRAN (FNA)- Senior Myanmar officials voiced their country's interest in setting upajoint cooperation commission with Iran inamove to expand economic ties and cooperation between the two states.
The announcement was made inameeting between Myanmar and Iran's deputy foreign ministers on Monday, according toareport by the Iranian Foreign Ministry's Information and Press Bureau.
At the meeting, the two sides emphasized expansion of trade and economic relations, and explored avenues for boosting cooperation.
Also during the meeting, the Myanmarese official stressed the necessity of more activity by the two countries' private sectors inabid to enhance trade and economic relations between the two Asian nations.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 12:28 PM0comments Links to this post
မြန်မာပြည်အကြောင်းလျှို့ဝှက်ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်ကား Returm To Burma အာရှအကောင်းဆုံး ရရန်ရှိ
BUSAN, South Korea - A movie shot secretly in Myanmar is in the running foramajor award at Asia’s top film festival this week with its director saying he wanted to portray the "real" state of life in the country.
"It is about the truth of Burma," said Myanmar-born director Midi Z of his first full-length feature, "Return To Burma."
"It is reality cinema."
The film is among 13 wildly diverse productions from 12 countries vying for two New Currents awards at the 16th Busan International Film Festival (BIFF), open to first or second-time Asian filmmakers and carrying prizes of US$30,000.
Midi Z revealed he had shot 90 per cent of the film in Myanmar and had sneaked his cameras andasmall crew into the country after finding official regulations for filming "just far too restrictive."
"It is very personal," Midi Z said of the film, the title of which uses Myanmar's alternative name. "Most of the film belongs to my own experiences."
"Return to Burma" charts the story of howaman returning to the country of his birth finds the situation has not changed in the years since he left, despite what he had imagined. The director was born in Myanmar but left for Taiwan when he was 16 to further his studies.
The award winners will be announced on Friday, the final day of this year’s festival.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:45 AM0comments Links to this post
မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ သမတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အထူး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပီကင်းမှာရောက်ရှိနေပြီး မြစ်ဆုံရေကာတာ ကိစ္စဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို.ဆိုပါတယ် အခြားသော နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူကိစ္စများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို.ဆင်ဝှာ သတင်းမှာဖေါ်ပြပါတယ်။
မည်သို.ပင်ဖြစ်စေ မြန်မာတရုတ်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန် ရေးဟာ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို. ကျွန်ုပ်တို. ပါတီက ခံယူပါတယ်
Chinese Foreign Minister Yang Jiechi (R) shakes hands with his counterpart of Myanmar U Wunna Maung Lwin, who came to China as the special envoy of Myanmar President U Thein Sein, in Beijing, capital of China, Oct. 10, 2011. (Xinhua/Ding Lin)
BEIJING, Oct. 10 (Xinhua) -- China and Myanmar on Monday agreed to properly settle matters relatedasuspended joint hydropower project in Myanmar, and both sides pledged to increase cooperation and work toward bringing mutual benefits to the two nations.
The agreement was reached in Beijing during talks held between Chinese Foreign Minister Yang Jiechi and his Myanmar counterpart U Wunna Maung Lwin, who is visiting China asaspecial envoy of Myanmar President U Thein Sein.
According toapress release issued by the Chinese Foreign Ministry after the talks, the two sides have conductedathorough consultation over the Myitsone hydropower plant project, which was ordered to be suspended by Myanmar's president.
The two foreign ministers also exchanged views on bilateral relations and other issues of common concern, with both voicing commitments to push forward the bilateral comprehensive and strategic partnership inabid to achieve joint development, said the press release
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:10 AM0comments Links to this post
ဥရောပ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပမည်ဟုဆို
THE 20th European film festival will be held at Nay Pyi Daw Cinema in Yangon from October 22 to 28.
The festival will be presented by the British Council, French Institute and the Italian and German embassies in Yangon.
Seven films will be shown during the festival, including British film Made in Dagenham (2010), directed by Nigel Cole; German films My Words, My Lies — My Love (2009), directed by Alain Gsponer, and Neukölln Unlimited (2010), directed by Agostino Imondi and Dietmar Ratsh; and Italian movie La Spettatrice (The Spectator, 2004), directed by Paolo Franchi.
The French selections will include Roshdy Zemís 2006 film Mauvaise Foi (Bad Faith) and Marc Dugainís Une Exécution Ordinaire (An Ordinary Execution, 2010).
Another British film will also be shown, with the title yet to be confirmed.
Free invitations to attend the film screenings will be available starting from October 17 at the British Council, French Institute and participating embassies.
The invitations can be exchanged for tickets at Nay Pyi Daw Cinema on the day of each screening, from 9am until 20 minutes before the show.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:48 AM0comments Links to this post
(philstar.com) Updated October 09, 2011 04:30 PMComments (0)
YANGON (Xinhua) - The 37th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-Japan Business Meeting (AJBM) will be held in Myanmar's former city early next month, sources with AJBM holding committee said Sunday.
To make development of potential trade and economic relations between ASEAN and Japan, the three-day meeting is scheduled to take place at Sedona Hotel in Yangon from Nov.2to 4.
Such business meeting with ASEAN and Japan will be the first of its kind hosted by Myanmar.
A large number of entrepreneurs from all ASEAN countries and Japan will participate to discuss on the fields of economic, trading and investment cooperation, the sources said.
Some the memorandum of understanding (MoU) related with industry, hotel and tourism sectors will also be signed during the meeting, it added.
"We had tried to host such meeting four years ago, "U Khin Shwe,aMyanmar top entrepreneur, who will be also the chairman of upcoming AJBM told Xinhua.
"A total of 120 chairmen and top entrepreneurs from ASEAN countries and Japan as well as over 120 Myanmar entrepreneurs are listed to attend", he said.
"It is the best time to explore the opportunities to invest in Myanmar as the new government is making changes on economic and other sectors," he added.
Myanmar joined the ASEAN along with Laos in July 1997, ratified the ASEAN Charter in July, 2008.
Last month, Myanmar was admitted to the ASEAN Inter- Parliamentary Assembly (AIPA) asapermanent member which was announced at the 32nd AIPA held in Phnom Penh, Cambodia.
It expects to adoptavariety of documents on political, economic, social and women affairs, rights of migrant workers, and drug fighting in order to build stronger cooperation and relations among the ASEAN member countries.
Japan and ASEAN shareaclose relationship based onalong history of friendship.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:20 AM0comments Links to this post
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်ပေးမည်ဟု ဦးရွှေမန်း မှ နော်ဝေ ၀န်ကြီးသို.ပြောပြီ
Burma promised to release 2,000 political prisoners
The military regime in Burma held last yearahighly criticized elections, but afterwards the generals pulled back and gave the countryacivilian government andaparliament that acts inakind way.
Some of the former military leaders have been eager advocates ofanew, democratic development in the country.
State Secretary Espen Barth Eide met Friday National Assembly President U Shwe Mann in Burma's capital of Naw Pyi Taw.
U Shwe Mann wasaformer number three in the junta, but now wants democratic reforms welcome.
နော်ဝေဘာသာဖြင့်ပြောကြားထားသောနော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရရုပ်မြင်သံကြားမှ ကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းမှန် ဖြစ်လျှင် အထူးကြိုဆိုပါသည်။
အစိုးရသစ်တက်လာတာဟာ ရက်ပေါင်း ၂၀၀ လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ NLD ကတော့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာနဲ့ပဲ ပါတီမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့ လေသံပစ်နေပါပြီ။ ရှေ့ရက်ပေါင်း ၂၀၀ လောက်တောင်ကြို တင်အကွက်မမြင်ခဲ့တဲ့ NLD ရဲ့ဦးဆောင်မှုကို ပြည်သူများ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး နဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးက ထောက်ခံထားတဲ့ ဦးဆောင်ပါတီကို အလွယ်တကူ ဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့ပြီး အမှားကိုဝန်မခံပဲ ပြည်သူကို သေချာရေရာတဲ့ ဦးဆောင်မှုမပေးနိုင်တဲ့ပါတီခေါင်းဆောင် အ ချို့ကို ပြည်သူဟာ ဆက်လက်ယုံ ကြည် နေကြဦးမှာလား။
ပါတီမှတ်ပုံတင်တာနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာကိုသီဲးခြား ခွဲပြီးစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ဦးဝင်းတင်က ဆိုပါတယ်။ သူ့တစ်ဦးတည်းသဘောလို့လည်းပြောသွားပါသေးတယ်။ ဘယ်သူစကားကိုယုံရမှာလည်း NLD ??? ။ ပါတီမှတ်ပုံတင်တော့မယ်ပြောရင် တစ်ချိန်က မှတ်ပုံတင်ခဲ့တဲ့ပါတီတွေကို ရန်သူ့လူလို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကို သတိတရနဲ့ တောင်းပန်ဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး U WIN TIN ။
ပြည်သူကို ဦးဆောင်မှုအမှား ပေးခဲ့တာကိုလည်း ၀န်ချတောင်းပန်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ အခုလို သတိပေးလိုက်တော့ ကျွန်ုပ်တို့ပါတီကို ရန်သူ့လူပါ လို့ထပ်ပြောဦးမလား။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင် တယ်ဆိုလို့ သဘောထားပျော့ပြောင်းသူတွေ မဟုတ်ပါ။ မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက် မူဝါဒ အပေါ်မှာ သဘောထား တင်းမာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဟာ ပြည်သူအတွက် မဆီလျှော်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ ဦးဆောင်မှုပေးဖို့ကြိုးစား နေဦးမယ်ဆိုရင် ဆက်လက် ဝေဖန်မှုပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ဘယ်တော့မှ အလျှော့ပေးလိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ပြည်သူကို ပင်ပန်း ဆင်းရဲခံစေတဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ထောက်ခံ ပြီး အစိုးရကိုဖိအားပေး တဲ့နည်းကို ကျင့်သုံးနေတာကိုလည်း ရပ်တန့်သင့်ပါပြီ။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာ NLD ရဲ့မူ ၀ါဒ မဟုတ် ဘူးဆိုနေပေမဲ့ NLD က ထောက်ခံနေတဲ့မူဝါဒဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်။ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်မလုပ် သင့်တော့ပါဘူး။ အခုချိန်ဟာ ဥရောပနဲ့ အမေရိက မှာ အလွန်ပဲ စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်ဖြစ်လို့ တိုင်းပြည်တိုင်းဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုတွေဖေါက်ပြန်မှုကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းဟာ အင်မတန် မြင့်မားတဲ့ တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစရိတ်တွေကိုသုံးစွဲနေရပါသေးတယ်။ အခုအချိန်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမယ် ဆိုရင် ၀င်လာသမျှတစ်ကျပ်တစ်ပြားကို လက်ခံကြိုဆိုရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
NLD နားလည်ဖို့က အစိုးရဟာ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုနဲ့ အကြပ်ကိုင်တာကို ဘယ်တော့မှ စိုးရိမ်လိမ့်မယ်မ ဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုပါပဲ။ နိုင်ငံတကာမိသားစု ဟာ နောက်ဆုံးတော့ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုတွေ ကို ပြန်ဖွင့် ပေးရမှာပါ။ NLD အလိုကျပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပေး မှ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုကို ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ နိုင်ငံတကာ ကိုတောင်း ဆိုမယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ပြည်သူကို ဆင်းရဲဒုက္ခ မျိုးစုံခံပြီး NLD ကို အာ-နာ ရအောင်လုပ်ပေး ရမယ်ဆိုတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်ပွဲကြီး ဖြစ်လာမှတော့ NLD ဆိုတာလည်းမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင် သူများလည်း ဘယ်သူမှ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
ပြည်သူကို ပန်ကြားချင်တာကတော့ စစ်မှန်တဲ့ဦးဆောင်မှုမပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ကို ထောက်ခံမှု မပြုရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာ ယုံကြည်ရတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူး ။ ယုံကြည်ရတဲ့မူဝါဒပဲရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ပြည်သူဟာ လူတွေထက် မူဝါဒတွေကိုသာ အလေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
NLD ရဲ့မူဝါဒ ဘာလဲ လို့မေးပါ။ ပါတီမှတ်ပုံပြန်မတင်ခဲ့တာ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ငံရေးကို လေးလေးနက်နက် မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ပဲ သပိတ်မှောက်ခဲ့တာ၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို မျက်စေ့စုံမှိတ် အခုချိန်ထိထောက်ခံနေတာ၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ပြည်သူက ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့မေးတာ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေကို ရန်သူ့လူလို့ပုတ်ခတ်တာ။ ဒါတွေဟာ NLD ရဲ့မူဝါဒတွေပါပဲ။
ပြည်သူကို အသိပေးချင်တာက ပြည်သူရဲ့ အလုပ်ဟာ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်သူတွေကို ထောက်ခံမှုပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ခံတဲ့နည်း တွေ များစွာရှိနိုင်တဲ့အထဲက ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်း သူတွေကို မဲထည့်ခြင်းဟာ ကမ္ဘာကုန်ကျယ်သရွေ့ လုပ်ဆောင်ရမဲ့နည်း နာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်းသူတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား မဲထည့်ဖို့ဖြစ်ပြီး။ မဲရုံသပိတ်မှောက်တဲ့ NLD ရဲ့မူဝါဒကို ကြော ခိုင်းလိုက်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူကို မှန်ကန်တဲ့ဦးဆောင်မှုမပေးနိုင်တဲ့ ပါတီတစ်ရပ်ကို နာခံစရာမလိုပါ။ ပါတီတစ်ရပ်ကို ထောက်ခံမယ်လို့ကြံတိုင်း အဲဒီပါတီရဲ့ မူဝါဒက ဘာလဲလို့မေးပါ။ အဲဒီပါတီကို ဦးဆောင်သူဟာ ဘယ်သူလဲ လို့မမေးပါနဲ့။ ဦးဆောင်သူဗဟိုပြုဝါဒ ဟာ ဒီမိုအရေစီမဟုတ်ပါ။ အာဏာရှင် စနစ်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦး ဆောင်သူတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လို့သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့မူဝါဒဟာ ဘယ်တော့မှ မသေပါ ။
ပါတီမှတ်ပုံတင်တာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာနဲ့ကို ခွဲခြားခွဲပြီး စဉ်းစားသင့်တယ် လို့ ဦးဝင်းတင်က ဘီဘီစီကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူတစ်ယောက်တည်းသဘောထားလို့လဲဆိုပါသေးတယ်။ ပါတီခေါင်းဆောင်တစ် ယောက်ရဲ့ တရားဝင် မီဒီယာမှာ ပြောတဲ့ သဘောထားဟာ ပါတီရဲ့မူဝါဒလို့ပဲ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်မလုပ်ပါနဲ. U WIN TIN !!!!!
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:14 AM0comments Links to this post